ပေါ်လစီ | နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
ဤမူဝါဒကျွန်ုပ်တို့သည်ပိတ်ပင်နည်းပြMasteries®များအတွက်လက်မှတ်လျှောက်ထားသူများထံမှလက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း, အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော် ပတ်သက်. နည်းပြအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်း (နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများ) မူဝါဒ၏သငျသညျအကြောင်းကြားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ လျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ဤမူဝါဒနှင့်အညီသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုသဘောတူသည်။ သူတို့ပိတ်ပင်ဖို့သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးစေခြင်းငှါဒါပိတ်ပင်, ပိတ်ပင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များ၏ထုတ်ဖော် (တရားရုံးနှင့်အစိုးရအမိန့်များအပါအဝင်အရပ်ဘက်ဆင့်ခေါ်စာ) ဥပဒေနှင့်အလိုက်နာရန်လိုအပ်သောကယုံကြည်သည်ဘယ်မှာလက်မှတ်လျှောက်ထားသူအနေဖြင့်သို့မဟုတ်ပိတ်ပင်ရဲ့အေးဂျင့်များနှင့်အကြံပေးဖို့လက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်ခြင်းငှါ သာတင်းကြပ်လျှို့ဝှက်ကန့်သတ်အောက်မှာ။
သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း, အသုံးပြုခြင်း and Share:
ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားနေချိန်မှာကျနော်တို့ပိတ်ပင်လက်မှတ်နှင့်စပ်လျဉ်းဆိုင်တဲ့ updates များကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်ဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုမပြတ်မတောက်စီးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးသငျသညျကိုမေးလိမ့်မည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်အချက်အလက်များပါဝင်နိုင်ပေမယ့် (လျှောက်ထားသူရဲ့) အမည်, လိပ်စာ, တယ်လီဖုန်း, ဒါမှမဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သောယူဆအခြားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်။
audio / ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ:
ငါတို့သည်သင်တို့၏သတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူပါ။ သငျသညျဆိုက်ကနေတဆင့်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များတင်ပြတဲ့အခါ, သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းနှစ်မျိုးစလုံးကိုကာကွယ်ထားသည်။ ကျနော်တို့အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းနေရာတိုင်း, သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံတဲ့လမ်းအတွက် encrypt လုပ်ထားတဲ့ကိုကူးစက်နေပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဆာ၏အောက်ခြေတွင်တံခါးပိတ်သော့ခတ်အိုင်ကွန်ကိုရှာဖွေနေခြင်းသို့မဟုတ်ဝဘ်စာမျက်နှာ၏လိပ်စာရဲ့အစမှာ "https" ရှာနေဖွငျ့ဤအတည်ပြုရန်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အွန်လိုင်းမှတဆင့်ကူးစက်သောအထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ encryption ကိုအသုံးပွုရစဉ်တွင်, ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအော့ဖ်လိုင်းကာကွယ်ပေးသည်။ တိကျတဲ့အလုပ် (ဥပမာ, ငွေတောင်းခံသို့မဟုတ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု) ဖျော်ဖြေဖို့သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်သူကိုသာဝန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်ရယူသုံးစွဲနိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုယျတိုငျသက်သေပြအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထားသည့်အတွက်အဆိုပါကွန်ပျူတာများ / ဆာဗာများကိုလုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထားနေကြသည်။
နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်း (နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများ) ကြှနျုပျတို့၏အသုံးပြုသူများသည် '' privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ကြောင်းအဆုံးမှကျွန်တော် privacy ကိုကြှနျတျောတို့၏ကတိကဝတ်ကိုသရုပ်ပြနိုင်ရန်အတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုကြေညာချက်နှင့် spam များကိုမူဝါဒကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဆိုက်ကိုအကြောင်းအရာနှင့်အသုံးမပြုနိုင်ပါတယ်မည်သို့သတင်းအချက်အလက်လည်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်ပင်ရဲ့မူဝါဒများအထက်နှင့်ကျော်လွန်ပြီး spam များကိုဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများအတွက်ပိတ်ပင်က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်မိမိတို့အအဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုစာရင်းပြုစုဖို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြသူတစ်ဦးချင်းစီမှစလှေတျတျောစီးပှားအီလက်ထရောနစ်မက်ဆေ့ခ်ျများလျှောက်ထားစေခြင်းငှါသတိပြုပါ။
ပိတ်ပင်နှင့်၎င်း၏ Web hosting ကုမ္ပဏီပိတ်ပင်ရဲ့အေးဂျင့်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်, ငါတို့၏ website မှသင့်ရဲ့အလည်အပတ်ခရီးအကြောင်းကိုနည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းသိမ်းဆည်းထား။ ကျနော်တို့ဧည့်သည်, ငါတို့၏ဆိုက်ကိုပိုပြီးသုံးစွဲနိုင်စေရန်စာရင်းအင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါနှင့်ကျွန်တော်တို့ဟာစုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်မဆိုအခြားတတိယပါတီမှပေးမထားပါ။ အထူးသကျနော်တို့မှတ်တမ်းတင်နိုင်တယ်:
သငျသညျကိုအင်တာနက် access ရာကနေဒိုမိန်း၏အမည်။
ဆိုလျှင်သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေသည့်အနေဖြင့် website ၏အင်တာနက်ကိုလိပ်စာ။
Web browsing software နှင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ကိုကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုနေသည် operating system ကိုအမျိုးအစား။
အဆိုပါပိတ်ပင်က်ဘ်ဆိုက်၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများကိုသင်၏ကွန်ပျူတာ hard drive ကိုအပေါ်ထားရှိဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သည့်a"ကို cookie ကို" သုံးပါစေခြင်းငှါ, သောပိတ်ပင်ဆိုက်ကိုအတွက်သင်အသုံးပြုစာမျက်နှာများ log ရန်နှင့်သင်တို့ရှေ့မှဆိုက်သွားရောက်ခဲ့ပြီးလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ပိတ်ပင် web server သို့ခွင့်ပြု ။ အဆိုပါပိတ်ပင်ဆာဗာဆိုက်ကိုရန်သင့်ခရီးစဉ်အတွင်းအချို့သောအင်္ဂါရပ်များကိုဤအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ သင်တစ်ဦး cookie ရဲ့နေရာချထားမေတ္တာရပ်ခံသောအခါသင်တို့ကိုသတိပေးဖို့သင့် browser ကိုထားနှင့်ကလကျခံဖို့ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ တစ်ဦး cookie ကိုငြင်းပယ်ခြင်းအားဖြင့်, ဆိုက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်အင်္ဂါရပ်အချို့စနစ်တကျလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ (အီးမေးလ်လိပ်စာ, etc) စုဆောင်းရန် cookies များကိုမသုံးပါ
ဝက်ဘ်ဆိုက်လျှောက်လုံးပုံစံများသတင်းအချက်အလက်ကိုတောင်းဆိုဖို့, ထုတ်ကုန်, နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများရှိပေမည်။ ဤရွေ့ကားပုံစံများကိုပုံမှန်အားဖြင့် (ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်တွေကဲ့သို့) ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်, (ထိုကဲ့သို့သောသင်၏ဖုန်း, လိပ်စာသို့မဟုတ် e-mail လိပ်စာကဲ့သို့) ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်တောင်းခံနှင့်လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (ဥပမာ, ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား, အကျိုးစီးပွားဒေသများ, တည်နေရာ, etc ။ ) ဤပုံစံများကနေဆက်သွယ်ပါအချက်အလက်များကိုပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery, မြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများသို့မဟုတ်သင်တောင်းဆိုရန်ကြောင်းအဖွဲ့ဝင်သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ဖို့အသုံးပြုသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုမှာစုဆောင်းလူဦးရေအချိုးအစားနှင့်ပရိုဖိုင်းကိုဒေတာသင့်ရဲ့ website မှာအတှေ့အကွုံစိတ်ကြိုက်နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ထိန်းသိမ်းနေတဲ့ဒေတာဘေ့စဖို့ကဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူတစ်ဦးအကျိုးစီးပွားညွှန်ပြမူလျှင်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများသို့မဟုတ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆိုက်အသုံးပြုသူများကိုဆက်သွယ်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များအစဉ်အဆက်တတိယပါတီဖို့ shared သို့မဟုတ်ရောင်းချခဲ့ပါသည်။
ဆိုက်ကတခြားဆိုဒ်များမှလင့်များင်နိုင်ပါသည်။ ပိတ်ပင်ထိုကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ privacy ကိုအလေ့အကျင့်အတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ ပိတ်ပင်ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကြော်ငြာသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာဧရိယာထဲမှာဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ပါရှိသည်သတင်းအချက်အလက်တိကျမှန်ကန်သောအာမခံချက်မဟုတ်ပါဘူးရှိမရှိတစ်ခုအပြင်ဘက်တွင်က်ဘ်ဆိုက်မှလင့်များ၏ Inclusion ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုယင်း၏အသုံးပြုသူများစာရင်းဆာဗာများနဲ့ Web ဖိုရမ်များမရရှိနိုင်စေလိမ့်မည်။ ဤဒေသများအတွင်းထုတ်ဖော်ကြောင်းမဆိုသတင်းအချက်အလက်အများပြည်သူဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖြစ်လာသည်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်စီးပွားရေးအချက်အလက်ထုတ်ဖော်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအခါသင်သတိထားလေ့ကျင့်ခန်းသငျ့သညျ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိအချက်အလက်များ၏ဆုံးရှုံးမှု, အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲတချို့ကာကွယ်ပေးရန် firewalls များအပါအဝင်အွန်လိုင်းစုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပေးရန်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအီလက်ထရောနစ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုသည်။ အဲဒီလုံခြုံရေးအစီအမံများအသုံးပြုမှုကိုအင်တာနက်ကျော်ထောက်ပံ့သတင်းအချက်အလက်ကြားဖြတ်မည်မဟုတ်ပါတဲ့အာမခံချက်မဟုတ်ပါဘူး။
ရှေးခယျြမှု / Opt-Out သို့မဟုတ်ပြင်ဆင် / UPDATE
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကို၏အသုံးပြုသူများငါတို့ထံမှဆက်သွယ်ရေးလက်ခံရရှိ၏ထွက်ရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ သင်တို့သည်နောက်တဖန်မဆိုအနာဂတ်ဆက်သွယ်ရေးခံယူသို့မဟုတ်ယခင်ကပေးထားသောသတင်းအချက်အလက်ကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုအပ်လိုပါကနည်းပြအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး, certification@certifiedcoach.org အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။
ပိတ်ပင်က၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာမူဝါဒများပြောင်းလဲပစ်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ မူဝါဒမှမဆိုအပြောင်းအလဲများကဤစာမျက်နှာပေါ်တွင် posted လိမ့်မည်။
ဤသည်ဆိုက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းက၎င်း၏ရုံးခန်းကနေပိတ်ပင်ကထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့် operated ဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်ပင်ပစ္စည်းများ, သတင်းအချက်အလက်, သို့မဟုတ်ဤဆိုက်ကိုပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တဆင့်ရရှိနိုင်ပါအကြောင်းအရာသင့်လျော်သောသို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ, သတင်းအချက်အလက်, ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာတရားမဝင်ရှိရာနယ်မြေကနေသူတို့ကို access ကိုတားမြစ်ထားသောကြောင်းမျှကိုယ်စားပြုစေသည်။ သည်အခြားနေရာများတွင်မှဤဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ရှေးခယျြသူများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပြုမူမှုအပေါ်အဲဒီလိုနှင့်သက်ဆိုင်သောဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အတူလိုက်နာမှုတာဝန်ရှိသည်။
SITE ကို CONTENT
သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာများနှင့် Non-စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းအဘို့ဤဆိုက်ကိုပေါ်, download, နှင့်ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများရယူနိုငျသညျ။ သငျသညျ, ပထမပိတ်ပင်ထံမှရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ရယူမရှိဘဲဤဆိုက်ကိုမှရရှိသောဆော့ဖ်ဝဲ, ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုမဆိုသတင်းအချက်အလက်, မိတ္တူပြုပြင်မွမ်းမံဖြန့်ဝေ, transmit, Display, လုပ်ဆောင်မျိုးပွား, ထုတ်ဝေ, လိုင်စင်, ကနေလက်ရာများဖန်တီးလွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပွငျ, သင်ပထမဦးဆုံးနေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ရယူစရာမလိုဘဲအခြားမည်သည့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတစ်ခုသို့မဟုတ်ကွန်ယက်ပတ်ဝန်းကျင်၌ဤဆိုက်ကိုအပေါ်တွေ့ရသောပစ္စည်းများမသုံးနိုငျသညျ။
ဒီဆိုက်ကို (ဆိုက်၏အဖြစ်အဖွဲ့အစည်းနှင့် layout ကို) ပေါ်မှာရှိသမျှပစ္စည်းများကိုနည်းပြအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံးကပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်နေကြသည်။ နည်းပြ၏©မူပိုင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်း (နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများ) ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ မျိုးပွါး, ဖြန့်ဖြူး, သို့မဟုတ်ဤဆိုက်ကိုမှာမူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်ပစ္စည်းများဂီယာမရှိပိတ်ပင်များ၏တိကျမ်းစာ၌လာသည်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲခွင့်ပြုထားပါသည်။
ပိတ်ပင်ရဲ့ဆိုက်ကိုအပေါ်ပါဝင်သည်အဖွဲ့ဝင် / နည်းပြဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်နည်းပြမှ / စျေးကွက်ရှာဖွေရေးထုတ်ကုန် / န်ဆောင်မှုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် posted သည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်အဓိကအားဖြင့်တစ်နည်းပြ၏အလားအလာ clients များတဲ့နည်းပြနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြု၏ရည်ရွယ်ချက် posted ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူအခြားအီးမေးလ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးကိုအောက်ပါမူများကိုလိုက်နာသင့်တယ်:
သင်သည်သင်၏အီးမေးကိုလက်ခံရရှိလူတစ်ဦးနှင့်အတူကြိုတင်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသင့်ပါတယ်။ (သင်ကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ပေးခြင်းတစ်စုံတစ်ဦးကကငျးနှငျ့ ပတျသကျ. -အဆက်အသွယ်ရဖို့ခွင့်ပြုချက်ဆိုလို။ တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ထားသည်အလားတူပင်လျှင်ဤသည်၌လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ )
လိပ်စာ "ကို reply" နှင့် "ကနေ" တစ်ဦးကခိုင်လုံသောအသီးအသီးသတင်းစကားနှင့်အတူထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
သင်တစ်ဦး subscription ကိုစာရင်းကိုရှိပါကသင်လူတစ်ဦးစာရင်းကိုအပေါ်ဖြစ်ရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းကြောင်းအတည်ပြုချက်အီးမေးလ်ပို့သင့်ပါတယ်။
ဤမူဝါဒ၏ပြိုပျက်ရာပါဝင်သောတစ်ဦးကတိုင်ကြားမှုကျင့်ဝတ်များပိတ်ပင် Code ကိုချိုးဖောက်ခြင်းတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောကြောင့်သူတို့ရဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။ သူတို့တစ်တွေဖောက်ဖျက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်ကုစားလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောနည်းပြရဲ့အဖွဲ့ဝင်နှင့် / သို့မဟုတ်ပိတ်ပင်နှင့်အတူယုံကြည်စိတ်ချရသောဆိုင်းငံ့ထားရန်သို့မဟုတ်ရပ်စဲအဖြစ်ချမှတ်နိုင်ပါသည်။
ပိတ်ပင်ရဲ့မူဝါဒများအထက်နှင့်ကျော်လွန်ပြီး spam များကိုဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများအတွက်ပိတ်ပင်ဆိုက်ကိုအပေါ်သူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုစာရင်းပြုစုဖို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြသူတစ်ဦးချင်းစီမှစလှေတျတျောစီးပှားအီလက်ထရောနစ်မက်ဆေ့ခ်ျများလျှောက်ထားစေခြင်းငှါသတိပြုပါ။
သင်ဤ privacy ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများကို, ဒီဆိုက်ကိုများ၏အလေ့အကျင့်, သို့မဟုတ်ဤ website ကိုနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရာတွင်ရှိပါကအောက်ပါဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်:
အဆိုပါပိတ်ပင်ဒီ Program ကိုလျှောက်လွှာသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနှင့် privacy အလေ့အကျင့်ကိုသီးသန့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းနယူးမက္ကစီကို၏ပြည်နယ်၏ဥပဒေများမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပိတ်ပင်ဤမူဝါဒနှင့်၎င်း၏အလေ့အကျင့်ကိုအခြားတိုင်းပြည်များ၏ဥပဒေများနှင့်လိုက်လျောကြောင်းအဘယ်သူမျှမကိုယ်စားပြုမှုကိုမှန်ကန်စေသည်။